MoEngage: Ongorora, Chikamu, Shingairira, uye Gadzirisa Yako Rwendo rweVatengi-Rwekutanga | Martech Zone
Mutengi-wekutanga mutengi akasiyana. Nepo hupenyu hwavo hwakatenderedza nharembozha yavo, vanosvetukawo pakati pemidziyo, nzvimbo, uye migero. Vatengi vanotarisira kuti mabhureki ave anogara aripo nhanho navo uye nekuendesa zvakasarudzika zviitiko kune ese epanyama uye edhijitari ekubata-mapoinzi. Basa reMoEngage nderekubatsira mabhenji kuongorora, chikamu, kuita, uye kugadzirisa rwendo rwevatengi.
Ongorora Rwendo rweVatengi
Njere dzakapihwa neMoEngage dzinobatsira mushambadzi pakuronga rwendo rwevatengi vedu kuitira kuti vagone kukwira, kuchengetedza, uye kukura kukosha kwemutengi wega wega.
Shanduko Mafuri - Ziva matanho chaiwo apo vatengi vazhinji vanodonha. Gadzira mishandirapamwe yekuvhara kuburitsa uye kuidzosa kuapp yako, chitoro, kana kunze kwekubata.
Maitiro Ekuzvibata - Ziva mashandiro evatengi neapp yako uye nekuteedzera ako maKPIs. Shandisa izvi zviono kugadzira zvakanangwa zvakanyanya zvekuita mishandirapamwe.
Kuchengetedza Makohosi - Boka vatengi maererano nezviito zvavo, huwandu hwevanhu, nzvimbo, uye mhando dzemidziyo. Ongorora maitiro avo kwenguva yakati rebei uye uone kuti chii chinoita kuti vanamatire.
Vhura Analytics - Unganidza uye gadzirisa yako ese mutengi data kune imwe nzvimbo yepakati. Sangana nemidziyo yakaita seTafura uye Google Data Studio kuti uone zviri nyore, pasina chinodiwa cheETL chishandiso.
Kunobva Analytics - Enzanisa zvese zvako zvekutenga zvevatengi pane rimwe dashboard. Nzwisisa yakakwira kutendeuka yepakati kana chiteshi uye tarisa bhajeti yako kune iyo.
Nehungwaru Chikamu Chikamu Vateereri Vako
AI-inotyairwa segmentation injini, iyo inongoparadzanisa vatengi vako muzvikamu zvidiki-zvinoenderana nemaitiro avo. Iye zvino unogona kufadza mutengi wese neakanyanya kusarudzika kupihwa, kurudziro, kunyevera, uye kugadzirisa.
Zvikamu zvekufungidzira - Boka vatengi vako muzvikamu zvakaita sekuvimbika, kuvimbisa, panjodzi, uye zvichingodaro zvichienderana nemaitiro avo. Shandisa MoEngage fungidziro mamodheru kuti utore vatengi vanogona kupindura kukwidziridzwa.
Zvimiro zveCustom - Gadzira madiki-zvikamu zvichienderana nehunhu hwevatengi uye nezviito zvavo pawebhusaiti yako, email, uye app. Sevha makasitoma ako zvikamu uye wozvidzorera zviri nyore pamhepo yavo yehupenyu.
Ita Vateereri Vako Kwavari
Gadzira isina musono, yakabatana zviitiko zvevatengi munzira dzese nemidziyo. Fungidzira, gadzira, uye gadzirisa makwikwi ehupenyu hwevatengi. Rega injini yeMEEngage's AI iratidze meseji chaiyo uye inguva yakakodzera yekuitumira.
Rwendo Orchestration - Hazvina kumbobvira zvave nyore kufungidzira uye kugadzira omnichannel nzendo. Iva nevatengi vako nhanho dzese dzenzira uye gadzirisa rwendo rwavo kubva pane yekukwira kuenda mukubatirana kune kwenguva refu kuvimbika.
AI-Inotungamirwa Kugonesa - Mumushandirapamwe wevazhinji, MoEngage's AI Injini, Sherpa, inodzidza mashandiro emusiyano wega wega mune chaiyo-nguva uye inongotumira akanakisa musiyano kune vatengi pavanenge vangangoshandura.
Push Notifications - Kukunda network, chishandiso, uye zvisungo zveOS mukati meiyo ecosystem yeApple kuendesa ako ekuzivisa notifiti kune vamwe vatengi.
Chinyorwa Kugadziridza - Gadzira A / B uye Multivariate kuyedza nemaoko. Gadzira mapoka ekudzora, mhanyisa kuyedza, kuyera kusimudzira, uye iterate nemaoko.
One-to-One Kugonesa kugona
Gadzira zvakasarudzika zviitiko zvinokunda vatengi kwehupenyu hwese. Vafadze nezano rakagadzirirwa uye zvinopihwa zvichibva pane zvavanofarira, maitiro, huwandu hwevanhu, zvido, kutengeserana, nezvimwe.
Zvakasarudzika Zvinokurudzirwa - Sync wako chigadzirwa kana kugutsikana katarogu mutengi zvaunofarira, maitiro, kutenga mapatani, uye hunhu. Vafadze pamwe nemazano akajeka.
Webhu Kuita munhu - Simba shandura zvemukati zvewebhusaiti, zvinopihwa, uye kunyangwe marongero epeji ezvikamu zvakasiyana zvevatengi. Gadzira yakatarwa mireza mireza uye peji marongero anoshanduka zvine simba zvichienderana nemaitiro evatengi, huwandu hwevanhu, zvaunofarira, uye zvaunofarira.
Onsite mameseji - Ibva pane yakajairwa webhusaiti pop-ups. Iine pa-saiti mameseji iwe unogona nehungwaru kumutsa yakasarudzika webhusaiti pop-ups zvichibva pamaitiro evatengi uye hunhu.
Geofencing - Iine MoEngage's Geofencing kugona, iwe unogona kukonzeresa zvine chekuita uye zvemamiriro ekuzivisa kubva pane yako mutengi ikozvino nzvimbo.
Ona Maitiro eMoEngage's Mutengi Engagement Platform Inogona Kusimbisa Yako Yekukura Strategic.
Gain nzwisiso dzakadzama mune kuti vatengi vari kuita sei neako app uye vanogadzira yakanangwa yakanangwa.
sika mameseji akasarudzika uye kubatanidzwa kubatsira vatengi kupfuura akasiyana ekubata-mapoinzi.
Kuwedzera AI kutumira iyo chaiyo meseji panguva iyoyo, uye gadzira multivariate mishandirapamwe yekuyedza yakanakisa misiyano.
Tags: ai-inotungamirwa zvikamuhunhu maitirokutendeuka funnelskuongorora kwevatengi rwendodhizaini-inotungamirwa kubatanidzwazvine simba zvemukatigeofencingoptimization yerwendorwendo orchestrationbhuku rekugadzirisanharembozha yekushambadziramoengageonsite mamesejiPersonalizationzvikamu zvekufanotaurachigadzirwa kurudzirodzikisa noticeszvikamusosi analyticswebhu pachako
Vuelio: Yako Media uye Inokurudzira Relationship Platform
Apple iOS 14: Yakavanzika Dhata uye iyo IDFA Amagedhoni